Amaphoyisa - iSearch
Qala Baby & Child ukuvikeleka amaphoyisa
Die amaphoyisa umngane nomsizi wakho, ngakho-ke amaphoyisa avame ukubhekwa. Kodwa yimiphi imisebenzi amaphoyisa ayenayo futhi ihlelwe kanjani?
Ngokuyisisekelo, i-POLICE ayikho eJalimane njengaye. Kulokhu, isimo sethu sezwe sibonakala emaphoyiseni, ngakho-ke umuntu uhlukanisa phakathi kwamaphoyisa ombuso namaphoyisa ase-federal. Amaphoyisa asendaweni yilapho amaphoyisa asekhaya. I-federal states inesibopho senhlangano, inhlangano, ukuqeqeshwa nokukhokha. Baphinde banqume ukuthi yiziphi amandla abazibekela amaphoyisa. Yilokho kunjalo, ngokuqinisekile uke wezwa emikhankaso yokhetho kwezombusazwe, lapho ngokuvamile inani lokudilizwa kanye nemisebenzi emisha kuyinkinga. Amaphoyisa ombuso anesibopho sokuphepha kwamaphoyisa. Kuye ngohulumeni, uhlukaniswe ezindaweni eziningi. Lokhu kuhlanganisa, isibonelo, amaphoyisa amacala obugebengu obugebengu obubi kakhulu njengokubulala, ukuphanga, kodwa futhi wenza inhlawulo. Amaphoyisa asezingeni eliphansi futhi ngokuvamile aqala ukuxhumana nabo. Amaphoyisa omgwaqo abandakanyeka ezingozini zomgwaqo kanye nemfundo yezemoto. Khona-ke kunezindawo ezikhethekile ezifana namaphoyisa omgwaqo, onomthwalo wemfanelo olinganiselwe kuphela emgwaqeni omkhulu. Ekhanda lamaphoyisa ombuso yiHhovisi likaMbuso loPhenyo oluPhezulu. Ihhovisi likaHhovisi lika-Criminal Investigation lisekela amaphoyisa asekhaya, kodwa futhi libhekene nobugebengu obukhulu noma ubugebengu obukhethekile, isibonelo ngokumelene nezombangazwe. Futhi, kukhona ukuhlukaniswa iziqephu ezifana nokuvikelwa kombuso. Ngaphezu kwalokho, iHhovisi likaHulumeni lobuPhenyo lobuPhenyo nalo libhekele ukuvikelwa kwabantu. Ngakho-ke, ukuvikelwa kwezikhonzi zikahulumeni kanye nongqongqoshe kungena emkhakheni wamaphoyisa obugebengu bohulumeni. Ukuqeqeshwa, imishini kanye nokusebenza okukhulu, amazwe agcina izindawo ezifanele kanye nezinyunithi.
Umthetho wezomthetho wamaphoyisa wombuso
Njengoba ungabona kulolu hlu, ngamaphoyisa kazwelonke anemithwalo yemfanelo eminingi. Nakuba uhlale unaka lapha, kukhona umehluko omkhulu phakathi kwezifundazwe. Ukufanekisa lokhu ngesibonelo, eBerlin kukhona into ephoyisa. Ehhovisi "Ukuvikelwa kwempahla ephakathi" yamapholisa, eyodwa iwukuvikela kuphela izindawo ezisemthethweni zezwe, kodwa futhi nokuhlanganiswa kanye nezinto eziningi ezisengozini. E-Berlin, isibonelo, lokhu kungaba yimilayezo evela kwamanye amazwe. Lezi zingxabano azibonakali kuphela enhlanganweni, kodwa futhi isibonelo kulo mishini. Ukuqondiswa kwamaphoyisa wesifunda kuholele uNgqongqoshe wezwe elingaphakathi. Ukuzimela okukhulunywe kakade ekuqeqesheni, inhlangano kanye nomholo kulawulwa emazweni aphethwe yizifundazwe emithethweni yabo nemithetho yamaphoyisa kazwelonke.
Yilokho amaphoyisa ase federal
Njengoba kushiwo kusingeniso, kunqunywa umahluko phakathi kwamaphoyisa nesifundazwe. I-Police Federal inomkhakha omncane kakhulu wokusebenza uma kuqhathaniswa nePhoyisa likaZwelonke. Phakathi kwezinye izinto, i-Federal Police inesibopho sokuvikelwa nokushushiswa kwezindiza zezindiza, iziteshi zezitimela, kodwa futhi nesakhiwo se-federal real estate. Yiqiniso, i-Federal Federal nayo isekela iziphathimandla zamaphoyisa ezisemthethweni ekushushiseni, isibonelo, ngezinqubo zokuphenya noma amasu angatholakali kubo. I-Police Federal nayo igxile ebugebengu bezwe, okuyinto eqinisweni ayimise emiphandleni yombuso waseGermany ngaphakathi eJalimane. Ngaphezu kwalokhu, izindawo zokuzibophezela zePolish Federal zihlanganisa nokuphathwa kwemingcele ngokubambisana namasiko, kanye nokuvikelwa komuntu siqu kuHulumeni waseHulumeni. Inhlangano, inani lamaphoyisa, imishini ihlukile emazweni ase-federal futhi ilawulwa yimithetho yayo nemigomo. Ukuqondiswa kwePolish Federal kuholela kuNgqongqoshe Wezangaphakathi we-Interior.
Izinhlobo ezikhethekile zamaphoyisa eJalimane
Ngalezi zindlela ezimbili zamaphoyisa kanye nesifundazwe kukhona namanje amafomu akhethekile. La mafomu akhethekile afaka i-Voluntary Police Service kanye nePolisa City. Kwamanye amazwe ase-federal, kukhona noma ngabe kwakuyisisebenzi samaphoyisa ngokuzithandela. Isibonelo saseBaden-Württemberg, nakuba umsebenzi wamaphoyisa wokuzithandela usuqedile lapha. Laba yizakhamuzi ezizivolontiya njengamaphoyisa. Banemfundo ephothule, bahlomile futhi kufanele basekele futhi banciphise amaphoyisa ajwayelekile emaphoyiseni. Enye ifomu lamaphoyisa wedolobha. Noma ubani ogijima noma oshayela iFrankfurt on the Main, ngokuqinisekile uzoqaphela nge patrol izimoto nge bluish futhi umbhalo "Stadtpolizei". Yiziphi izakhamuzi eziningi ezingazi, wonke umasipala waseJalimane ubeka imithetho nemithetho yamaphoyisa. Ngezinga elingakanani lixhomeke njalo kumbuso nomthetho wendawo. Izifunda ezijwayelekile zokulawula lapha, isibonelo, ukupaka nokupaka izimoto zokupaka. Ukuhambisana nalezi zimiso zamaphoyisa kanye nezimiso yiyona mthwalo wemfanelo kuphela kamasipala. Isibonelo, amaphoyisa edolobha laseFrankfurt ngokuhambisana nemigomo yamaphoyisa kanye nemithethonqubo ayimfanelo, kodwa kufanele futhi akhulise umqondo wokuphepha emzini ngokushaya amacici. Futhi kunenye indlela ekhethekile yamaphoyisa eJalimane, okuyiBundestag. Ngakho, iBundestag yaseJalimane inamaphoyisa ayo. Lokhu kunesibopho sokuvikelwa kwamaphini nabasebenzi, kodwa futhi nezivakashi kanye nezivakashi kanye nokushushiswa. Umsebenzi namaphoyisa we-Bundestag ngumongameli we-Bundestag.
Isihloko esilandelayoI-Roomba 980 ngu-iRobot